Ambohimanarina : Norobain’ny mpanao fihetsiketsehana ny vary ho an’ny daholobe -
AccueilRaharaham-pirenenaAmbohimanarina : Norobain’ny mpanao fihetsiketsehana ny vary ho an’ny daholobe
12/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Araka ny tapaka tao anatin’ny filankevitry ny minisitra, 2 volana lasa izay dia natomboka omaly ny hetsika ho fanampiana ny olona marefo eny ifotony. Amin’ny maha-hetsika fanampiana azy dia vary no nanombohana azy eto amin’ny faritra Analamanga, ary ho hita isan’andro isan’andro eny amin’ny distrika 6 eto Antananarivo renivohitra, ka amidy amin’ny vidiny mirary. Izany hoe amin’ny vidin’ny 800 Ariary ny kilao, ary 250 Ariary ny kapoaka. Araka ny fanambaran’ny Lehiben’ny faritra Analamanga, Rakotonanahary Ndrantonomena dia toerana 23 eto amin’ny faritra Antananarivo renivohitra no amidy ny vary amin’izao fotoana izao, ary ezahina ovaina manaraka ny filan’ny mponina.
“Efa mijery mpandraharaha afaka miara-miasa aminy ny minisiteran’ny Varotra hijerena ny vokatra hafa ahafahana manampy ny sarambambem-bahoaka, ahafahana manampy ny vondron’ny olona marefo fa vary no hanombohana azy izao. Tetik’asa izy io, ary tsy ho tapaka mihitsy ato anatin’ny roa volana fa aorian’izay jerena ny hitohizana miaraka amin’ny minisiteran’ny Varotra”, hoy ny fanazavan’ny Lehiben’ny faritra Analamanga. Tanjona ny hanenana ny fahasahiranana eny ifotony. Fa na dia izany, hiferana ny azo vidiany ny isan-tokantrano izay 1 hatramin’ny 2 kilao isan’andro. Mba tsy hisian’ny mpanararaotra ihany koa, hisy ny fanaraha-maso mba tsy hisian’ireo alaim-panahy hivarotra ny vary amin’ny vidiny ambony kokoa. Marihina hatrany fa efa am-bolana no nomanina ity hetsika fanampiana ity izay niarahan’ny Primatiora sy ny minisiteran’ny Varotra, ny Mponina, ny Serasera ary fiaraha-miasa amin’ny sefo fokontany sy ny lehiben’ny distrika.
Teny Ambodihady Ambohimanarina no nisantarana ny famarotana ity vary natao ho an’ny rehetra ity. Norobain’ireo mpanao fihetsiketsehana andeha hamonjy ny hetsiky ny depiote etsy amin’ny 13 mey anefa ireo vary ireo. Nanaovan’izy ireo bodongerona fotsiny, ary nambarany fa tokony zaraim-potsiny. Efa nivadika “terrorista” ve izany ny mpanao fihetsiketsehana satria lasa mandrahona sy manao bontolo fotsiny. Marihina fa nanafatra vary ny fanjakana ary naloa vola ka rariny raha amidy amin’ny vidin’ny mirary fa tsy zaraim-potsiny, hoy ny fanazavan’ny mpandrindram-paritry ny Hvm Analamanga Ndranto Rakotonanahary. “Misy mantsy ireo te-hanao botolo fotsiny izao, satria efa zatra toe-tsaina tia misotasota sy tia korontana. Noho izany, n’inona n’inona ny tsy fitovian-kevitra dia ny zavatra mahasoa ny vahoaka tsy tokony hosakanana”, hoy izy.
Vaindohan-draharaha ny sehatry ny fahasalamana ka tsy nataon’ny vadin’ny Filoham-pirenena, Voahangy Rajaonarimampianina ankilabao, nahazo fanampiana eo amin’izay sehatry ny fahasalamana izay ny tobin’ny miaramila RM1 etsy Andohanan’Analakely omaly tolakandro. Tonga nanolotra fampitaovana maro sy nitokana ...Tohiny